Umshini we-vacuum emulsifying unguent ubunjwe kakhulu ngembiza enkulu, imbiza yamanzi, ibhodwe lamafutha, umgqomo wokugcwalisa, uhlelo lokuxuba, uhlelo lokupholisa, uhlelo lwe-vacuum, uhlelo lwe-jacking, uhlelo lwe-contrl ne-platform yesikhulumi.
Insiza yokuphila isikhathi eside.
Injiniyela uyatholakala ukukhonza phesheya.
Izinto zokusetshenziswa eziwuketshezi kuqala zixazululwa kuqala futhi zihlakazeke embizeni yamanzi nasembizeni kawoyela, zabe sezingena kubhayela we-emulsification yipompo yokuphuma; inkatho ye-powder isephini lokugcwalisa elinesando lomoya ezansi kolunye uhlangothi, ingaphazamisa ukukala kodonga futhi yenze izimpushana ziqhutshwe embizeni enkulu ngokuphelele, kuqinisekiswe isilinganiso esinembile sezinto zokusetshenziswa. Izimpushana zimunzwa embizeni enkulu ngohlelo lwe-vacuum. Ibhokisi lokuxubana nodonga oluphakeme ngamandla liqinisekisa ukuhlangana okunamandla kwezinto. Indandatho yokuhlakazeka enejubane elikhulu izokwephula kahle izinto nezinto eziyimpuphu. I-trace element inlet ifakwe ohlangothini lwebhodwe elikhulu ukuyixuba entweni ngaphandle kwemfucuza. Umgayo wokugaya ungasethwa ebhodweni ngokuzikhethela ukwenza ngcono izinto zokwakha. Ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, amanzi apholile ejakhethi azopholisa izinga lokushisa, futhi amabhamuza azosuswa nge-vacuum defoamation.
Umuthi wokuxubha, ukhilimu wokushefa, ama-pastes abukhali.
Umthamo wedizayini (L)
Isishisi eshukumisa amandla (kW)
Isivinini esisheshayo esivuthayo (ngomzuzu)
Homogenizer amandla (kW)
Ijubane le-homogenizer (rpm)
Umshini futha amandla
Amandla avuselelayo (kW)
Ukucaciswa / Igama
Ingcindezi Yokusebenza (ebhodweni)
Isixhumi Sokuqeda Ngokushesha
Isivinini Esijikelezayo: 0-1000r / min
Isivinini Esijikelezayo: 0-20r / min
Umshini Degree ngaphakathi ebhodweni
Iphampu Yomshini Wokufaka Amanzi Degree I-Vacuum Degree -0.096MPa）
Ubukhulu （Ubude * Ububanzi * Ukuphakama） mm
Ngaphambi kokuvula ikhava:
Ngemuva kokuvula ikhava:
Uhlelo lokulawula i-elekthronikhi
Push control inkinobho
Langaphambilini Isihlungi Sokuqandisa Amakha
Olandelayo: Izinsiza zokwelapha ezibuyela emuva ze-Osmosis